छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा २ काे मृत्यु १ वेपत्ता | eAdarsha.com
छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा २ काे मृत्यु १ वेपत्ता
पोखरा, १२ जेठ । गोरखा सिरानचोक गाउँपालिक–७ चिउरीभीरमा आइतबार ट्रिप्पर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना वेपत्ता भएका छन् ।
नयाँसाँघुबाट जौबारी तर्फ आउदै गरेको बा.५ख. १९८२ नं को ट्रिप्पर अनियन्त्रित भई चिउरीभीरको सडकबाट तीन सय मीटर तल खसेको थियो ।
दुर्घटनामा परी ट्रिप्पर चालक २० बर्षीय सुमन खड्काको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको प्रदेश नं ४ प्रहरी कार्यालय पोखराले जानकारी दिएको छ । सोही ट्रिप्परमा सवार धादिङ जोगीमारा निवासी २१ बर्षीय प्रदीप श्रेष्ठ दरौंदी नदीमा खसेर वेपत्ता भएका छन् भने गोर्खा सिरानचोकका १५ बर्षीय जनक गुरुङ ट्रिप्परबाट हाम फालेर बाच्न सफल भएका छन् । गुरुङ सामान्य घाइते भएका छन् । उक्त घटनाको बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।
त्यसैगरी गोरखा आरुघाट गाउँपालिका–९ आरुघाट बजारमा बा.३ख. २५८३ नं को फोरव्हील स्वराज गाडीमा काम गर्ने धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–२ विशालनगरका ५० बर्षीय विष्णु श्रेष्ठको सामान झार्ने क्रममा गाडीबाट खसेर मृत्यु भएको छ ।
आइतबार दिउसो गाडीबाट खसेर गम्भीर घाइते भएका श्रेष्ठलाई उपचारका लागि आरुचनौटे प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र आरुघाट लगिएको भएपनि उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको जानकारी प्रहरीले दिएको छ । उक्त गाडी र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई घटनाको बारेमा अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।